दाजैहरू, आशीर्वाद देऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
दाजैहरू, आशीर्वाद देऊ
लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी हो— सुशासन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । यसका लागि, २०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । आफैंमाथि परीक्षण गर्न नेताहरू तयार छन् ?
आश्विन २०, २०७८ केशव दाहाल
दलहरू यति बेला महाधिवेशन वा पुनर्गठनको चटारोमा छन् । कांग्रेसले महाधिवेशनको प्रक्रिया थालेको छ । एमाले विभाजन भयो र लगत्तै विधान अधिवेशनमा गयो । माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरहरूले आ–आफ्ना गुटलाई पार्टीकरण गरे । माओवादी नेता प्रचण्ड हतास स्वरमा पार्टी पुनर्गठनको पैरवी गरिरहेका छन् ।
यदि सकारात्मक जोडबल हो भने यावत् हलचलहरू आफैंमा सुन्दर घटना हुन् । तर चल्तीकै स्वाङ र तुष्टि हो भने यी मात्र मदारीका तमासा हुन् । कर्मकाण्ड । एजेन्डाबिना गरिने महाधिवेशन र पुनर्गठनको के अर्थ ?
संयोग भनौं वा नियति, हाम्रा दलहरूबीच केही रोचक समानता छन् । सबैमा हुटहुटी छ । सबैमा खटपटी छ । सबैमा नेतृत्वको देवत्वकरण छ । तर कसैले पनि आजका असफलताहरूको राजनीतिक र व्यावहारिक समीक्षा गरेका छैनन् । सबैमा पूर्वाग्रह छ, तर प्रतिस्पर्धा छैन । चाकरी छ, आलोचना छैन । सत्ता छ, सपना छैन । जीवन छ, चेतना छैन । लेनदेन छ, राजनीति छैन । घटनाहरू स्वयंले स्पष्ट गर्छन्, सबै दलका पहिलो र दोस्रो पुस्ता आजका लागि कामै नलाग्ने देखिए । थोत्रा भाँडाकुँडाजस्ता, पत्रु । बज्छ तर प्रयोग छैन । न त चेतना, न त सपना, न त सिर्जना । नेताहरूमा मात्र सत्तालिप्सा छ, गति र ऊर्जा छैन । दुर्भाग्य, पहिलो पुस्ताको लाजलाई दोस्रो पुस्ताले छोपिरहेको छ र ऊ स्वयं नांगेझार हुँदै छ । कार्यकर्ताहरू यो प्रहसनका तमासे बनेका छन् । कस्तो घनघोर अन्धकार ?
राजनीतिलाई अन्धकारबाट कसरी निकाल्ने ? के राजनीतिमा उज्यालो खोज्ने काम देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र वा महन्थबाट सम्भव छ ? अथवा रामशरण, अर्जुननरसिंह, भीम, ईश्वर वा शशांकबाट नयाँ आशा गर्न सकिन्छ ? असम्भव छ । बिम्बमा भनौं, पतिंगरहरूले फूल हुनुको भ्रम छर्दैमा कसले पत्याउँछ ?
जस्तो कि, देउवाबाटै प्रश्न गरौं, के देउवा स्वयंले आफू प्रधानमन्त्री हुनुको औचित्य स्थापित गर्न सक्लान् ? सक्दैनन् । अतः कांग्रेसले विचार गर्नुपर्ला, मुलुक सञ्चालनमा पटक–पटक असफल कांग्रेस यो दुर्भाग्यका लागि कुन श्रापले अभिशप्त छ ? अन्यथा देश कांग्रेसको नेतृत्वमा उहिल्यै स्वर्ग बन्नुपर्ने हैन र ? तर भयो के ? कांग्रेस आफ्नै इतिहाससँग आँखा जुधाउन नसक्ने भयो । सर्वत्र असफलता ।
भर्खरै एमालेको विधान अधिवेशन सकियो । त्यहाँ के भयो, भन्नुपर्दैन । के कम्युनिस्ट शास्त्रमा व्यक्तिको स्तुति, चाकरी र देवत्वकरणलाई महाधिवेशन भनिन्छ ? प्रश्नहरू हराउनु र आलोचना चाकडीमा रूपान्तरित हुनु कम्युनिस्ट आन्दोलनको महापतन हो । अन्यथा आफ्नै नेतालाई किन सोधिएन, फुटको रहस्य ? निश्चय नै, अधिवेशनस्थल भव्य थियो । तर त्यो भव्यताभित्र विचारको भव्यता किन खोजिएन ? नेताहरू राता झन्डाहरूले घेरिएर बसे । अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाइयो । तर कम्युनिस्ट हुनु भनेको के हो, किन कसैले सोधेन ? कम्युनिस्टहरू (?) भित्र हुर्कंदो पतनको यो कथा एमालेको मात्र कथा हैन, समाजवादीको पनि हो र माओवादीको पनि हो । यस्तो बेला राजनीतिमा उज्यालो खोज्ने नयाँ पुस्ता कहाँ छ ?
देशले चौतर्फी असफलता भोगिरहेको छ । केही मान्छे यो असफलतालाई त्रासमा बदल्न चाहन्छन् । निश्चय नै, निर्वाचन हेर्‍यो, महँगो छ । सरकार हेर्‍यो, परिणामविहीन छ । संसद् बस्दैन, तर सांसदले तलब बुझेकै छन् । अख्तियार छ, काम गर्दैन । दलालहरू मोटाएकै छन् । तर जनताको भोक, रोग र विभेद उस्तै । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने योजना दस वर्षमा सकिँदैन । ढलमा बच्चा झर्छ र हराउँछ, कसैले जवाफ दिनुपर्दैन । भ्रष्टाचार छ, सबै चुपचाप । सर्वत्र सत्ताको विवाद । सर्वत्र गुट र विभाजन । फुटेका पार्टीहरू पनि उस्तै, जुटेका पार्टीहरू पनि उस्तै । र, केही खराब मान्छेहरू यो सबैलाई अस्थिरता र द्वन्द्वमा बदल्न चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू राजनीतिक असफलतालाई व्यवस्थाको असफलता भनेर हल्ला गरिरहेका छन् । उनीहरू पार्टीको असफलतालाई लोकतन्त्रको असफलता भन्दै ढोल बजाउँदै छन् ।
तर सत्तामा बस्नेहरू चुपचाप छन् । तर मार्नेहरू मौन छन् । नेतृत्वको पहिलो पुस्ता त त्यस्तै भयो, दोस्रो पुस्ता अझ पहिलोभन्दा खराब, लाचार र लबस्तरो देखिँदै छ । नेताको फेर समाउने र सत्ताको वैतरणी पार गर्ने उसको नियतले समस्या देख्दैन, सत्ता देख्छ । राजनीति फोहोर हुँदा आहालको डिलमा बसेर गन्देझारको माला उन्न रुचाउने दोस्रो पुस्ताले लाज पचाइसक्यो । यस्तो बेला तेस्रो पुस्ताले आफ्नै नेतृत्वमाथि निर्मम समीक्षा नगर्ने हो भने राजनीति कता जाला ?
यी प्रश्नहरूको अन्तर्य के भने, दलहरूभित्र जाज्वल्यमान नयाँ पुस्ता आवश्यक देखियो । राजनीतिमा नयाँ विचार, नयाँ मुद्दा, नयाँ संस्कृृति र नयाँ नेतृत्व आवश्यक देखियो । पहिलो पुस्ताले व्यवस्था त फेर्‍यो तर व्यवस्थापन बदल्न सकेन । त्यसैले शासकीय व्यवस्थापनमा नयाँ, प्रभावकारी र परिणाममुखी प्रबन्धन आवश्यक भयो । पहिलो र दोस्रो पुस्ता पुरानै कर्मकाण्डमा खुसी देखिए । उनीहरू पुरानै सत्तामा खुसी देखिए । त्यसैले उनीहरूलाई चुनौती दिने र नयाँ गन्तव्य खोज्ने तेस्रो पुस्ता आजको आवश्यकता भयो । अन्यथा अरूजस्तै नर्कतिर हिँडेर स्वर्ग कसरी प्राप्त हुन्छ ?
बदलाव कहाँ खोज्ने ? विकल्प कहाँ खोज्ने ? तेस्रो पुस्तालाई अनुरोध छ, समस्या जहाँ छन्, त्यहीँबाट बदलाव खोजौं । असफलता जहाँ छ, त्यहीँबाट सफलता खोजौं । के आजका असफलताहरू व्यवस्थाका दोष हुन् ? होइनन्, व्यवस्थापनका दोष हुन् । अतः बदलाव व्यवस्थापनमा खोजौं । के आजको संकट संविधानले सिर्जना गरेको हो ? होइन, यो सरकारको असफलता हो । अतः बदलाव सरकारको चरित्रमा खोजौं । देश असफल भएको होइन, दलहरू असफल भएका हुन् । त्यसैले बदलाव आफ्नै दलहरूको जीवनमा खोजौं । बदलाव आफ्नै पार्टीहरूमा खोजौं । पछिल्लो असफलता लोकतन्त्रको होइन, नेतृत्वको असफलता हो । अतः बदलाव आफ्नै नेतृत्वमा खोजौं ।
अबको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था शासकीय सुधारको आधार हुन सक्छ । किनभने आफ्नो कार्यकारी प्रमुख छान्ने सार्वभौम अधिकार अवश्य नै जनतामा निहित छ । यसो गर्दा निर्वाचित कार्यकारीहरू तानाशाह हुन सक्छन् भन्ने जुन सन्दर्भ छ, त्यसमा यथोचित नियन्त्रणको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । साथै छलफल गरौं, प्रत्येक तहका कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुखहरूको पदावधि कति बनाउने ? यसमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल निर्धारण गरौं ।
त्यसैगरी सांसदहरू नै मन्त्री बन्ने परम्परागत संसदीय प्रणालीको विकल्प के होला ? किनभने सरकार गठन–विघटनमा निरन्तर सांसदहरूको संख्या हाबी हुँदै जानु राम्रो विषय होइन । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले निश्चित मापदण्डका आधारमा संसद्–बाहिरबाट मन्त्रिमण्डलको गठन गर्ने विधि अर्को प्रस्ताव हुन सक्छ । यसो गर्दा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले नियमन गर्न पाउँछ । मन्त्री बन्ने लोभबाट सांसदहरू मुक्त हुन्छन् । निर्वाचनका बेथितिहरू सकिन्छन् । साथै, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरौं । निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘नो भोट’ लागू गरौं । पछिल्लो समय पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिकाको प्रस्ताव आइरहेको छ । त्यो के हो ? छलफल गरौं । स्थानीय तहमा, जिल्ला समन्वय समिति हटाऔं । स्थानीय पालिकामा गैरदलीय निर्वाचन गरौं ।
अहिले राज्यसत्ताको पार्टीकरण तीव्र छ । संवैधानिक अंगहरूमा हुने नियुक्तिहरू दलीय प्रभावबाट मुक्त छैनन् । हाम्रा आयोग, विश्वविद्यालय, संस्थान र सेवाप्रदायक अंगहरू निम्छरा छन् । अतः सबैको निष्पक्षता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गरौं । प्रश्न गरौं, के दलहरू निजामती प्रशासनमा सम्पूर्ण फेरबदल गर्न तयार छन् ?
लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी हो— सुशासन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । सेवाप्रवाहमा सुधार । कानुनी शासनको प्रत्याभूति । यसका लागि, २०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । के आफैंमाथि परीक्षण गर्न नेताहरू तयार छन् ? हामीसँग अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रजस्ता महत्त्वपूर्ण अंगहरू छन् । तर यी अंगहरूमाथि जनताको विश्वास घट्दो छ । के यिनीहरूलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाउन दलहरू तयार छन् ? नेतालाई सोधौं । खबरदारी गरौं । बदलाव र हलचल आफ्नै दलबाट सुरु गरौं ।
आर्थिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । अतः किसान, मजदुर, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून वेतनधारी वर्ग र ग्रामीण जीवनलाई कसरी आर्थिक न्याय दिने ? पार्टीभित्र मन्थन थालौं । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सार्वजनिक यातायातलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? यसलाई पार्टीको एजेन्डा बनाऔं । विपन्नलाई आर्थिक सुरक्षा दिन रासन कार्डको व्यवस्था गरौं । अथवा आम्दानीको न्यूनतम ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई भनौं । भूमिसुधार, पूर्वाधार विस्तार, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आवासको ग्यारेन्टी, बिजुली र पानीको सर्वसुलभ वितरणजस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिने विषयहरूलाई राजनीतिका मुद्दा बनाऔं ।
विज्ञहरू भन्छन्— कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा वार्षिक १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले एक दशकभित्र वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो दरलाई १० प्रतिशतमा झार्छ । यो कसरी सम्भव छ ? छलफल गरौं । विज्ञहरूलाई सोधौं । र, साथमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णतः निःशुल्क गरौं । अन्यथा विचार गरौं, यति ठूलो राजनीतिक उपलब्धिपछि पनि साधारण मान्छेको जीवनमा किन कुनै परिवर्तन देखिएन ? यो असफलता आफ्नो काँधमा बोकेर तपाईं कसरी कांग्रेस ? तपाईं कसरी कम्युनिस्ट ? तपाईं कसरी समाजवादी ? असफलताहरूलाई छोपछाप पारेर नयाँ पार्टी बनाउनुको के अर्थ ? विगतको समीक्षा नगरी गरिने महाधिवेशनको के प्रयोजन ?
राजनीतिक व्यवस्था राज्यसत्तालाई आकार दिने मुख्य विषय हो । तर प्रभावकारी व्यवस्थापनबिना यसले परिणाम दिँदैन । अतः व्यवस्थापनमा बदलाव आजको प्रमुख एजेन्डा हो । यो नै आजको राजनीति हो । यो नै आजको कार्यभार हो । यो नै आजको विचार हो । तर, के यो कार्यभार पूरा गर्न पहिलो र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वले सक्ला ? सक्दैन । किनभने त्यहाँ आशा र अपेक्षाको उज्यालो छैन । त्यहाँ विवेक छैन, झेल छ । त्यहाँ सिर्जना छैन, तिर्सना छ । त्यहाँ परिवर्तनको सपना छैन । त्यहाँ क्षमता छैन । तर तेस्रो पुस्ता ? अपेक्षा गरौं, योसँग सम्भावना छ । अतः यो पुस्ताले नयाँ सुरुवात गर्न सक्छ । उसले नयाँ प्रश्नहरू गर्न सक्छ । उसले नयाँ ढंगले सोच्न र सपना देख्न सक्छ । त्यसैले पहिलो र दोस्रो पुस्ताका दाजैहरूलाई अनुरोध छ, सत्ताको लोभ पापी चीज हो; यो जुनीमा पुग्यो । अब तपाईं निवृत्त हुनुहोस् र आराम गर्नुहोस् । यो नयाँ पुस्तालाई आशीर्वाद दिने समय हो ।
र, तेस्रो पुस्तालाई अनुरोध छ— युवा साथीहरू, लौ समय भयो । मोर्चा सम्हाल ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ ०८:१९
वैकल्पिक पार्टीको तिर्सना
राजनीति (पार्टी) निर्माण आफैंमा युगीन प्रयत्न हो । लहडमा स्थापना गरिएका पार्टीहरू सानोतिनो आँधीमा डगमगाउनु स्वाभाविक हुन्छ । किनभने मनोगत चिन्तन र आग्रहले मात्र राजनीतिक पार्टी बन्दैन ।
भाद्र २९, २०७८ केशव दाहाल
प्रारम्भमानव सभ्यता अनेकौं रुमानी सपनाहरूको जगमा उभिएको पर्वत शृंखला हो । तर सपनाहरूको विशेषता के भने, त्यो समयसँग अविभाज्य हुन्छ । राजनीति त्यही समय र सपनाको उच्चतम अभिव्यक्ति हो । यसरी हेर्दा प्रत्येक राजनीति कुनै न कुनै कालखण्डको विशिष्ट सपना हो ।
त्यसका लागि गरिने संघर्ष हो । बृहत्तर अभियान हो । नेतृत्व हो । मुख्य कुरा, मान्छेका सपनाहरू फेरिँदै जान्छन् र समयको चालसँगै अगाडि बढिरहन्छन्, राजनीति त्यो बदलावलाई देख्ने र नेतृत्व गर्ने गतिशील प्रयत्न हो । जब नयाँ युगका सपनाहरू पूरा गर्न परम्परागत राजनीतिले सक्दैन तब नयाँ राजनीति चाहिन्छ । त्यही नै वैकल्पिक राजनीति हो ।
बीसौं शताब्दीमा मान्छेले देखेका मुख्य सपनाहरू थिए— लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, उदारवाद र समाजवाद । यिनै सपनाहरूले संसारभर शताब्दी रजगज गरे । यसैका वरिपरि राजनीतिले चक्कर मार्‍यो । अनेक युद्ध भए र लाखौं मान्छे मारिए । यिनैमाथि कविता र कथाहरू लेखिए । चलचित्र बने । पछिल्लो शताब्दीमा संसार यिनै विचारहरूको वरिपरि ध्रुवीकृत भयो ।
निश्चय नै, बीसौं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिले उडान मार्‍यो । युरोप र अमेरिका युद्धबाट निस्किए र समृद्धिको शिखर चुमे । तर अफ्रिका र एसियाका अनेकौं देश गरिबीबाट उम्कन सकेनन् । हुने र नहुनेबीचको खाडल चर्को बन्दै गयो । संसारका दस जना धनीका हातमा असीमित स्रोत जम्मा भयो । तर दैनिक करोडौं मान्छे भोकै रहे । अवश्य नै उत्पादन बढ्यो, तर न्यायपूर्ण वितरण भएन । एकातिर लोकतन्त्रले महिला, दलित, सीमान्त समुदाय र अल्पसंख्यकहरूलाई भनेजस्तो न्याय दिन सकेनÙ अर्कातिर समाजवाद सर्वसत्तावादमा फेरियो । भ्रष्टाचार बढ्यो । वातावरण विनाश र कार्बन उत्सर्जन तीव्र भयो । र, जनताको मत शासकहरूको शक्ति आर्जन गर्ने साधन बन्यो । मुख्यतः तेस्रो विश्वका सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् ।
सन् १९९० सँगै सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट सत्ताहरू ढले । साथै, पुँजीवादी लोकतन्त्रमाथि पनि जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गयो । त्यसैले परम्परागत लोकतन्त्र र समाजवादका विकल्पहरू खोज्न थालियो । बहसहरू सुरु भए । जस्तो, फ्रान्सिस फुकोयामाले भने— ‘इन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड द लास्ट मेन’ (१९९२) । ज्याक डेरिडा (सन् १९३०–२००४) ले उत्तरआधुनिक दर्शनको कुरा गर्दै भने— विनिर्माण । हर्बर्ट मार्खेज (सन् १८९८–१९७९) ले केही अगाडि नै परम्परागत वामपन्थमाथि आलोचना गर्दै भने— ‘न्यु लेफ्ट’ । थोमस पिकेटीले ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी’ (२०१३) प्रकाशित गर्दै सम्पत्तिको असमान वितरणले आर्थिक–सामाजिक अस्थिरता पैदा गर्नेतर्फ पुँजीवादी देशहरूको ध्यानाकृष्ट गरे । उदार पुँजीवादले आफ्ना नीतिहरूको समीक्षा गर्दै भन्यो— समावेशीकरण, सुशासन र सामाजिक सुरक्षा । सर्वत्र राज्यको भूमिकामाथि पुनर्विचारको माग बढ्यो । लोकतन्त्रलाई अल्पमत र बहुमतको संघर्ष नभई सामाजिक न्यायको विषय बनाइयो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको बहस सुरु भयो । यसरी, अनेक आयाममा नवीनताको खोजी गर्दै मानवसभ्यता एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्यो ।
नयाँ शताब्दी समावेशीकरण, सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्पूर्ण समृद्धिका सपनाहरू लिएर आयो । मुद्दाहरू नयाँ थिए, जसको नेतृत्व गर्न नयाँ राजनीति आवश्यक भयो । यो पृष्ठभूमि नै वैकल्पिक राजनीतिको वस्तुगत आधार हो । अतः आज हामी जहाँ उभिएका छौं, त्यो विन्दुबाट इतिहास, समय चेतना र भविष्यलाई हेर्ने एक प्रयत्न हो— वैकल्पिक राजनीति ।
नेपालमा झन्डै ७५ वर्षअगाडि कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीहरू गठन भए । यी पार्टीहरू त्यसै फुत्त प्रकट भएका थिएनन्, बरु पछिल्लो शताब्दीमा संसारभर चलेका राजनीतिक आन्दोलनहरूको जगमा निर्माण भएका थिए । परिणामतः कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व लिए । लोकतन्त्र अर्थात् पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन । पूर्ण लोकतन्त्र अर्थात् गणतन्त्रको आन्दोलन । यो आन्दोलन सफलता र असफलताको चाकाचुली खेल्दै अगाडि बढ्दै गयो । आन्दोलनकारीहरूले कहिले सरकार र कहिले सडकमा नेतृत्व गर्दै आए । २०६३ सालको आन्दोलनले परिवर्तनको अन्तिम कुइनेटो पार गर्‍यो । संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । तर आन्दोलन सफल भए पनि नागरिकमा पुराना दलहरूप्रतिको संशय उस्तै रह्यो । यहीँबाट पुरानो राजनीति धरमराउन थाल्यो र नयाँ सम्भावनाको आधार बन्दै गयो ।
प्रत्येक युगको वैकल्पिक राजनीति (पार्टी) अलग हुन्छ । तर, वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना कहिल्यै मर्दैन । कुनै बेला कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू वैकल्पिक थिए । राणा, पञ्चायत र राजतन्त्रको युगमा लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदिको कुरा गर्नु निश्चय नै वैकल्पिक विषय थियो । २०७२ को सविधानसँगै कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले देखेका सपनाहरू पूरा भए । ७० वर्ष लामो राजनीतिक आन्दोलन सकियो । समय फेरियो । फेरिएको समयले नयाँ मुद्दाहरू उजागर गर्‍यो । अर्थात्, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई मान्छेको जीवनमा जोड्न आवश्यक भयो । नयाँ कार्यभारहरू थिए— आर्थिक–सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र सम्पूर्ण स्वतन्त्रता । अर्थात्, पूर्ण बदलाव । यथावस्था नयाँ कार्यभारहरू पूरा गर्न पुराना पार्टीहरूको राजनीतिक क्षमताले पुग्दैनथ्यो, जुन २०४६ यता पटकपटक पुष्टि भएकै कुरा हो । ठीक यही विन्दुबाट नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको प्रयत्न सुरु भयो ।
२०४६ सालको परिवर्तनसँगै देवेन्द्रराज पाण्डे, टंक कार्कीहरूले नयाँ राजनीतिको प्रस्ताव गरे । लोकदलको गठन भयो । यद्यपि त्यसैताका पूर्वपञ्चहरूले पनि नयाँ पार्टी खोले । वस्तुतः नयाँ पार्टी खोल्नु र नयाँ राजनीतिको प्रस्ताव गर्नु आफैंमा भिन्न कुरा थियो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलन भर्खर सफल भएको थियो र कांग्रेस–कम्युनिस्टहरू परीक्षण हुन बाँकी नै थिए । त्यसैले डा. पाण्डेहरूले थालेको नयाँ प्रयत्नले आकार लिएन । वस्तुगत परिस्थिति तयार नभई मनोगत आग्रहबाट सुरु भएको लोकदल मात्र एउटा असल प्रयत्नमा सीमित भयो ।
२०६३ पछि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस अझ तीव्र भयो । त्यसैताका इटहरीमा वैकल्पिक विचार मञ्च बन्यो । काठमाडौंमा (स्वर्गीय) उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा विवेकशील अभियान सुरु भयो । २०७२ तिर आइपुग्दा बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलनलाई आलोचना गर्दै नयाँ शक्तिको आवश्यकता प्रस्ताव गरे । रवीन्द्र मिश्र, मुमाराम खनाल र सूर्यराज आचार्यहरूले अर्को पाटोबाट वैकल्पिक राजनीतिको छलफल अगाडि बढाए ।
वैकल्पिक विचार मञ्चले वैकल्पिक राजनीतिको भाष्य, विचार र संरचनाको कुरा गर्‍यो । केही प्रकाशनहरू आए । तर मञ्च आफैं राजनीतिक संगठनमा रूपान्तरित भएन । त्यसको सीमा के भने, विचारलाई व्यावहारिक राजनीतिमा रूपान्तरित गर्ने सामर्थ्य मञ्चसँग थिएन । यता भट्टराईले सुरु गरेको नयाँ राजनीतिक अभियान प्रचारात्मक हिसाबले निकै सशक्त थियो । तर त्यसको संगठनात्मक पक्षमा अनेकौं कमजोरी देखा परे । मुख्यतः नयाँ शक्तिले वैकल्पिक राजनीतिको गम्भीरतालाई समाउनै सकेन । संगठनहरू भद्दा हुँदै गए । सदस्यहरूमा पदको आकांक्षा बढ्दै गयो । नेताहरू भिन्न विचारप्रति उदार देखिएनन् । वस्तुतः माओवादी पृष्ठभूमिमा हुर्किएको वैचारिक जडताले आफूलाई नयाँ लयमा ढाल्नै सकेन । सबैका एकअर्काप्रति असन्तुष्टि र अविश्वास थिए, तर समाधान थिएन । परिणामतः पार्टी छोड्ने क्रम तीव्र भयो । यस्तो भयो कि, फरकफरक पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरू वैकल्पिक राजनीतिको मूल प्रवाहमा एकाकार हुनै सकेनन् । नयाँ शक्ति पार्टी नभई मोर्चा बन्यो र सकियो ।
निश्चय नै, विवेकशीलहरूमा नयाँ गर्ने हुटहुटी थियो । तर संस्थागत वैचारिकी थिएन । ढाका टोपी र झन्डासँगै राष्ट्रिय गीत गाउँदै सडकमा निस्किने त्यो युवा अभियानले विश्वराजनीतिको पछिल्लो प्रवृत्ति र वैचारिक बदलावको आवश्यकतामा धेरै ध्यान दिएन । अवश्य नै त्यो समूहसँग राजनीति सुसंस्कृत हुनुपर्छ भन्ने पवित्र भावना थियो, अभियानहरू रचनात्मक थिए, तर वैचारिक तथा संगठनात्मक हस्तक्षेप गर्ने तागत थिएन । अर्कातिर, साझा पार्टीमा लोकप्रियताको जग थियो, तर राजनीतिक पक्षधरता थिएन । पार्टीलाई सबैको प्रिय बनाउने गैरराजनीतिक चिन्तन साझाको मुख्य समस्या रह्यो । परिणामतः पार्टीको राजनीतिक परिचय स्थापित भएन । उल्टो पार्टी सस्तो लोकप्रियतामा फस्दै गयो । र, थाहै नपाई यो मधेस, महिला, जनजाति, दलित र सीमान्त समुदायका मुद्दाहरूमा निरपेक्ष देखिन थाल्यो । विकासलाई राजनीतिक आँखाले नहेर्नु यो पार्टीको कमजोरी बन्यो । अवश्य नै, अहिले विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीतिको मूलधार बनेको छ । यद्यपि यो पार्टीभित्र वैचारिक गन्तव्यको विवाद अझै सुल्झिएको छैन । यो विवादको समाधन कस्तो हुन्छ, त्यसैबाट यसको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
जग र छानोको सन्तुलन
विवेकशील साझाभित्र चलेको पछिल्लो बहसले फेरि एउटा प्रश्न उजागर गरेको छ । के नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना सकियो ? समय, समाज, समाजका सपना र त्यसभित्र निहित गतिशीलतामाथि विश्वास गर्ने हो भने वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना कहिल्यै मर्दैन । यो लड्दै, उठ्दै र आफ्नो बाटो आफैं बनाउँदै अगाडि बढिरहन्छ । मुख्य कुरा अनुभवहरूलाई संश्लेषण गर्ने, आफूले हिँडेको बाटोलाई फर्किएर हेर्ने, कमजोरीहरू सुधार्ने र अगाडि बढ्ने लचक त्यसमा हुनुपर्छ । नेपालमा पछिल्लो समय भएका वैकल्पिक राजनीतिका सबै अनुभवको स्वामित्व लिँदै त्यसलाई एकीकृत गर्न सके वैकल्पिक राजनीति अनिवार्य छ ।
त्यो अनुभव के हो ? वैकल्पिक राजनीतिका पछिल्ला प्रयत्नहरूलाई विचार गर्दा त्यसमा केही साझा परिदृश्यहरू देखिन्छन् । जस्तो, राजनीतिको जग र छानो निर्माणको असन्तुलन । अर्थात्, सबैले राजनीतिक आधारमा भन्दा उपरि–संरचनामा जोड दिएको देखिन्छ । जस्तो, पहिले मान्छेहरू जोडेर केन्द्रीय समिति बनाउने तर राजनीतिको विचार पक्षलाई प्राथमिकता नदिने । जग नमिलाई, पिल्लर नउठाई र बिमले नकसी हालिएको छानो कसरी बलियो हुन्छ ? यहीँनेर प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ— राजनीतिको जग के हो ? जग विचार हो । जग मुद्दाहरू हुन् । जग वैकल्पिक राजनीतिको ऐतिहासिक औचित्यलाई स्थापित गर्ने आह्वान हो । मान्छेलाई अपिल गर्ने, जोड्ने र संगठित हुन उत्प्रेरित गर्ने आधारहरू नखोजी एकैपटक माथिल्ला संरचनाहरू बनाउनु पार्टी निर्माणको सुल्टो बाटो कदापि होइन ।
राजनीतिमा विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो— उत्प्रेरणा । जस्तो, पार्टी निर्माणको उत्प्रेरणा व्यक्तिको लहड हो कि समय–चेतना ? अर्थात्, राजनीतिलाई भीडले उत्प्रेरित गर्छ कि समाजको वस्तुगत आवश्यकताले ? वैकल्पिक पार्टीहरू भीडबाट प्रेरित हुँदा सस्तो लोकप्रियतामा फस्ने खतरा सधैं रहन्छ । किनभने भीडले नेता खोज्दैन, सेलेब्रिटी खोज्छ । परिणामतः पार्टीमा विचार, प्रतिबद्धता, लगाव, राजनीतिक क्षमता र सुझबुझ गौण बन्छन् अनि व्यक्तिको लोकप्रियता प्रधान बन्न पुग्छ । त्यसपछि के हुन्छ ? संगठनहरू फ्यान क्लब बन्छन् । भन्न पर्दैन कि, फ्यान क्लब र दलमा फरक हुन्छ । फ्यान क्लबमा फ्यानहरू हुन्छन्, तर त्यहाँ राजनीतिक सुझबुझ, समालोचना, संकल्प र प्रतिबद्धता हुँदैन । अनेक तथ्यले भन्छन्— भीडबाट सुसंस्कृत, नयाँ र उन्नत राजनीति किमार्थ बन्दैन ।
राजनीतिक दलहरू उभिने आफ्नै आधारहरू हुन्छन् । राप्रपा, कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूका आआफ्नै परम्परागत आधार थिए र छन् । अतः पुरानै राजनीतिक आधारमा उभिएर कसैले नयाँ पार्टी बनाउँछ भने त्यो वैकल्पिक पार्टी हुँदैन । त्यो नयाँ पार्टी मात्र हुन्छ । जस्तो, कुनै पनी मार्क्सवादी पार्टी वैकल्पिक हुँदैन । कुनै पनी माओवादी पार्टी वैकल्पिक हुँदैन । परम्परागत लोकतन्त्रको कुरा गर्ने पार्टी वैकल्पिक हुँदैन । वंशवाद, धर्म वा जातको राजनीति गर्ने पार्टी वैकल्पिक हुँदैन । सबै नयाँ पार्टी वैकल्पिक हुँदैनन् । तर सबै वैकल्पिक पार्टीहरू नयाँ हुन्छन् । वैकल्पिक राजनीति (पार्टी) एक उन्नत, सुसंस्कृत र ताजा राजनीति हो । यसका लागि दह्रो, एकताबद्ध र सुझबुझपूर्ण प्रयत्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा वैकल्पिक राजनीति भ्रम हुनेछ । र, भ्रमले युगको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
राजनीति (पार्टी) निर्माण आफैंमा एक युगीन प्रयत्न हो । लहडमा स्थापना गरिएका पार्टीहरू सानोतिनो आँधीमा डगमगाउनु स्वाभाविक हुन्छ । किनभने मनोगत चिन्तन र आग्रहले मात्र राजनीतिक पार्टी बन्दैन । आजसम्म वैकल्पिक राजनीतिले आर्जन गरेको सबैभन्दा बलियो अनुभव र शिक्षा यही हो । निश्चय नै, वैकल्पिक राजनीति सम्भव छ । यो मर्दैन । तर त्यसलाई नयाँ विचार, नयाँ मुद्दा, नयाँ ढाँचा र नयाँ संस्कृतिले सुसज्जित गर्नुपर्छ । अन्यथा पुरानै जगमा माटो थुपारेर नयाँ घर कसरी बन्छ ?
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १९:५६